एक बैंक जम्मा के हो: यो कहाँ बनाइएको छ र सबै भन्दा राम्रो ज्ञात प्रकार | अर्थतन्त्र वित्त
क्लौडी क्यासलहरू | 04/10/2021 16:38 | जम्मा
यस तथ्य को बावजुद कि बैंक निक्षेपहरु राम्ररी परिचित छन्, थोरै मानिसहरु लाई थाहा छ कि उनीहरु साँच्चै समावेश छन्। कुनै पनी शंकाहरु छन् कि स्पष्ट हुन को लागी, हामी व्याख्या गर्नेछौं एक बैंक निक्षेप के हो।
यस लेख मा हामी कसरी निक्षेपहरु को काम, जहाँ उनीहरु लाई बनाउन सकिन्छ र जो सबैभन्दा लोकप्रिय प्रकार को हो चर्चा गर्नेछौं।
1 बैंक मा निक्षेप के हो?
1.1 निक्षेप कहाँ बनाइएको छ?
2 बैंक निक्षेप को प्रकार
2.1 डिमाण्ड बैंक निक्षेप
2.2 बैंक सावधि निक्षेप
2.3 प्रकार मा पारिश्रमिक संग बैंक निक्षेप
2.4 व्यक्तिगत दीर्घकालीन बचत खाता (CIALP)
2.5 चर ब्याज मा बैंक निक्षेप
2.6 संरचित निक्षेप
बैंक मा निक्षेप के हो?
जब हामी एक बैंक जम्मा को बारे मा कुरा गर्छौं, हामी एक बचत उत्पादन को सन्दर्भमा छौं। मूलतः ग्राहक समय को एक निश्चित अवधि को लागी एक बैंक, वा एक क्रेडिट संस्था को लागी पैसा को एक राशि दिन्छ। एक पटक त्यो अवधि बितिसकेपछि, इकाई जसलाई तपाइँले पैसा दिनुभयो यो फिर्ता गर्दछ। यो ध्यान दिनुपर्छ कि ग्राहक न केवल प्रारम्भिक पैसा वसूल, तर पनि पारिश्रमिक कि बैंक संग सहमत भएको छ। त्यहाँ बैंक निक्षेपहरु को धेरै प्रकार छन्, र हामी उनीहरु पछि छलफल गर्नेछौं, तर सबै भन्दा साधारण निश्चित ब्याज हो। दुबै नाफा र मुनाफा अवधि को अन्त्य सम्म अपरिवर्तित रहन्छ।
एक निश्चित समय को समयमा लगानी गरेको पैसा को सम्बन्ध मा बैंक, वा institutionण संस्था द्वारा प्रस्तावित मुनाफा TIN (नाममात्र ब्याज दर) को रूप मा जानिन्छ। सामान्यतया, सहमत अवधि लामो, बैंक द्वारा प्रस्तावित ब्याज दर उच्च। जम्मा को प्रभावी मुनाफा को बारे मा, यो APR (बराबर वार्षिक दर) भनिन्छ। यसमा खर्च, कमीशन र ब्याज समावेश छ। यो विभिन्न बैंकिंग संस्थाहरु द्वारा प्रस्तावित उत्पादनहरु को खरीद को अनुमति दिन्छ।
निक्षेप कहाँ बनाइएको छ?
यो धेरै सम्भव छ कि यो परम्परागत तरीका बाट पैसा जम्मा गर्न बैंक शाखा मा जान गाह्रो हुनेछ। काम र कार्यालय समय बीच, हाम्रो तालिका मा एक अन्तर को खोजि छ कि हामीलाई केहि नगद छोड्न अनुमति दिन्छ समय लाग्छ र थकाऊ हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ। इन्टरनेट को भीडभाड को बाहिर सिर्जना गरीएको छ कि अनलाइन बैंकिंग को लागी धन्यवाद बैंकि agencies्ग एजेन्सीहरु decongested संग, व्यक्तिगत रूप मा जाँदै छन् र हेर्न को लागी पर्खनु हाम्रो व्यस्त जीवन को लागी धेरै लामो लाग्न सक्छ।
आज हामी हाम्रो पहुँच भित्र छ लेनदेन को एक विस्तृत श्रृंखला हो कि हामी टाढा बाट गर्न सक्छौं। यी समावेश, उदाहरण को लागी, स्थानान्तरण र क्रेडिट कार्ड द्वारा अनलाइन भुक्तानी।
तर हामी के गर्छौं यदि हामी नगद प्राप्त गर्छौं? यो धेरै सामान्य छ र सम्भवतः हामी यसलाई सजीलै, सुरक्षित र एक बैंक मा कम से कम संभव असुविधा संग भण्डारण गर्न चाहन्छौं। यस कारण को लागी त्यहाँ विभिन्न तरीकाहरु छन् कि हामीलाई जम्मा सही गर्न को लागी अनुमति छ, जस्तै चेक जम्मा गर्ने विकल्प। यस तरीकाले हामी बोक्न वा नगद को ठूलो मात्रा मा बोक्न, जो धेरै मानिसहरु को लागी असहज हुन सक्छ।
साथै, एटीएम (multifunctional स्वचालित टेलर मिसिन) धेरै बर्ष को लागी अस्तित्वमा छ। यी तपाइँ बिभिन्न लेनदेन को एक ठूलो संख्या, जसको बीचमा जम्मा गर्ने विकल्प छ बाहिर लेन अनुमति दिन्छ। विधि को आधारमा हामी छनौट गर्न जाँदैछौं, हामी बिभिन्न चीजहरुको आवश्यकता पर्दछ। जे होस्, कैशियर आफैंले हामीलाई सबै उपकरणहरु को लागी हामीलाई आवश्यक हुनेछ प्रदान गर्दछ। निस्सन्देह, यो मात्र एक मामला मा एक कलम वा पेन्सिल बोक्न चोट छैन।
बैंक निक्षेप को प्रकार
कुनै श doubt्का बिना, स्पेनिश को मनपर्ने बचत उत्पादन बैंक निक्षेप हो। र यो आश्चर्यजनक छैन, किनकि यसको अपरेशन धेरै सरल छ। जस्तै कि हामीले पहिले नै पहिले नै व्याख्या गरिसकेका छौं, ग्राहकलाई मात्र समय को एक निश्चित अवधि को दौरान एक बैंक मा पैसा डेलिभर गर्न को लागी छ। जब त्यो अवधि समाप्त हुन्छ, बैंकले लगानी गरेको पैसा र ब्याज कि उनीहरु लाई शुरू मा सहमत भएको थियो फिर्ता गर्दछ। सजिलो छ?
निक्षेप को लाभ उनीहरु धेरै ठोस छन्, विशेष गरी समस्याग्रस्त समयमा। हामी ती मध्ये केहि को सूची मा जाँदै छौं:
उनीहरुसँगaद्वारा प्रदान गरिएको ग्यारेन्टी छ जम्मा ग्यारेन्टी कोष.
तिनीहरू एकदम पारदर्शी छन्।
यो धेरै सजीलै उनीहरुलाई भाडामा र पछि पछ्याउन को लागी हो।
हामी समय क्षितिज को विभिन्न प्रकार छन्, हामी लामो, मध्यम र छोटो अवधिको जम्मा पाउन सक्छौं।
साथै, त्यहाँ बैंक निक्षेप को विभिन्न प्रकार छन्। यो केवल एक को लागी हाम्रो आवश्यकताहरु र उद्देश्यहरु लाई सूट गर्ने कुरा हो। अर्को हामी मुख्य बैंक निक्षेप को बारे मा कुरा गर्नेछौं।
डिमाण्ड बैंक निक्षेप
सबैभन्दा राम्रो ज्ञात बैंक निक्षेप तथाकथित "माग मा" हो। यो पनि सबैभन्दा तरल र सबैभन्दा अनुबंधित छ, किनभने यसको साथ तपाइँ सबै समय मा पैसा हुन सक्छ। त्यो हो, त्यहाँ कुनै अवधि छ जसको समयमा हामी जम्मा गरिएको रकम छुन्न सक्दैनौं। नवीकरण गरिएका खाताहरू, बचत र जाँच खाताहरू अभ्यासमा माग जम्मा हुन्।
सामान्यतया, उनीहरु धेरै सरल छन् र तपाइँ एक खोल्न को लागी धेरै आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्न को लागी छैन। माग बैंक निक्षेप को उद्देश्य एक परिचालन समर्थन को रूप मा कार्य गर्न को लागी हो जसको माध्यम बाट बिभिन्न अपरेशनहरु गर्न सकिन्छ, जस्तै एक खाता मा प्रवेश, एक भुक्तानी वा एक स्थानान्तरण, प्रत्यक्ष डेबिट रसीद वा एटीएम बाट पैसा निकाल्ने। निक्षेप को यो प्रकार मुश्किल बाट कम से कम भन्न को लागी मुनाफा प्रदान गर्दछ।
एक नियमित आधार मा, माग बैंक जम्मा प्रशासन फीस को एक संग्रह, खाता मा ओभरड्राफ्ट को लागी, स्थानान्तरण को लागी, रखरखाव को लागी, आदि शामिल छ। जे होस्, धेरैजसो बैंकहरुले ग्राहकहरुलाई केहि फाइदा वा बोनस प्रदान गर्दछन् यदि पेरोल वा बैंक रसिदहरु को एक निश्चित रकम प्रत्यक्ष डेबिट द्वारा भुक्तान गरीन्छ।
बैंक सावधि निक्षेप
अघिल्लो भन्दा फरक, शब्द बैंक निक्षेप एक लगानी उद्देश्य छ। यो एक निश्चित अवधिको निक्षेप वा एक निश्चित अवधिको जम्मा को रूप मा पनि जानिन्छ। अपरेसन के हो जुन हामीले यस लेखको शुरुमा व्याख्या गरेका छौं: ग्राहक बैंक को लागी पैसा को एक रकम प्रदान गर्दछ र समय को एक निश्चित अवधि पछि पहिले सहमत भएको थियो, एक साथ सहमत ब्याज संग यो ठीक हुन्छ।
मूलतः यो एक प्रकारको loanण हो कि व्यक्ति बैंक मा बनाउँछ। बदलामा, यो अन्ततः एक ब्याज कि पहिले सहमत भएको थियो शुल्क लगाउँछ। त्यसैले, बैंक अवधिको निक्षेप सधैं एक परिपक्वता मिति छ। त्यो मिति पछि, ग्राहक स्वतन्त्र रूप बाट आफ्नो पैसा को निपटान गर्न सक्छन्।
घटना मा कि व्यक्ति सहमत मिति भन्दा पहिले पैसा को जरूरत छ, को लागी एक आयोग वा जरिवाना तिर्न बाध्य हुनेछ निक्षेप रद्द गर्नुहोस् अग्रिम। जे होस्, त्यहाँ केहि छन् कि कुनै दण्ड चार्ज गर्दैनन्। यो सधैं सावधानीपूर्वक अनुबंध मा हेर्नु पर्छ।
आज, जम्मा को यस प्रकार को मुनाफा धेरै कम छ, कम से कम स्पेन मा। जे होस्, हामी सजीलै र सुरक्षित यूरोपीय निक्षेप कि राम्रो प्रतिफल छ पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रकार मा पारिश्रमिक संग बैंक निक्षेप
त्यहाँ केहि बैंकहरु पनि छन् उनीहरु पैसाको सट्टा उपहार दिएर ग्राहकहरुलाई आकर्षित गर्ने कोशिश गर्छन्। उपहार सामान्यतया सबै स्वाद को लागी चीजहरु हो, जस्तै टेलिभिजन, खेल कन्सोल, भान्छा मिसिन, फुटबल बल, आदि। यी निक्षेपहरु पनि ग्राहक अनुबंध मा संकेत एक अवधि को लागी त्यहाँ पैसा राख्न बाध्य छन्। घटना मा कि तपाइँ समय अगाडी पैसा को उपयोग गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ एक जरिवाना तिर्न पर्छ। यो सामान्यतया प्राप्त उपहार को मूल्य बराबर छ।
यस मामला मा, जम्मा को मुनाफा मौद्रिक छैन, बरु एक प्रकार को पारिश्रमिक, यसको नाम संकेत गर्दछ। तर होशियार रहनुहोस्, यदि हामी पैसा प्राप्त गर्दैनौं, उपहार पनि कर योग्य छ। तेसैले, तपाइँ आय विवरण मा कर तिर्नु पर्छ।
व्यक्तिगत दीर्घकालीन बचत खाता (CIALP)
व्यक्तिगत दीर्घकालीन बचत खाता, जसलाई CIALPs पनि भनिन्छ, एक अपेक्षाकृत नयाँ प्रकारको बैंक निक्षेप हो। उनीहरु २०१५ मा व्यक्तिगत दीर्घकालीन बचत बीमा, वा SIALP संगै जन्मेका थिए। जस्तो कि तपाइँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, यो बैंकहरु थिए कि CIALPs र बीमा कम्पनीहरु को SIALPs को व्यावसायीकरण गरीएको थियो। दुबैको उद्देश्य दीर्घकालमा जनताको बचतलाई प्रोत्साहित गर्ने हो। वास्तवमा, पैसा ती खाताहरु बाट पाँच बर्ष सम्म रिडिम गर्न सकिदैन। यस कारण को लागी उनीहरु लाई "बचत योजना 5" को रूप मा पनि जानिन्छ।
के दीर्घकालीन भण्डारहरू यसको लायक हुन्छन्?
बैंक जम्मा को यस प्रकार को एक फायदा हो तर यो पनि एक हानि छ। यसको बलियो बिन्दु त्यो हो यो आय बयान गर्दा कर बाट छुट छ जब पाँच बर्ष बित्यो। जे होस्, यो प्रत्येक करदाता को लागी पाँच हजार यूरो मा एक वार्षिक बचत सीमा सेट छ। बीमा व्यक्तिगत छन् र एकल व्यक्तिको नाममा छन्।
चर ब्याज मा बैंक निक्षेप
चर ब्याज मा बैंक जम्मा को लागी, उनीहरु अलि अघिल्लो भन्दा धेरै जटिल छन्। यी मामिलाहरुमा, ग्राहक थाहा छैन ब्याज उसले पैसा को लागी उसले खातामा छोड्छ को लागी प्राप्त गर्न को लागी, यो एक विशिष्ट सूचकांक मा निर्भर गर्दछ। सामान्यतया यो हो यूरीबोर। धेरैजसो बैंकहरु बचतकर्ता Euribor उपज र एक निश्चित प्रसार प्रदान गर्दछ। त्यसैले ग्राहक मात्र विभेद ग्यारेन्टी छ। तर त्यो पनि खतरामा छ कि Yuribor नकारात्मक छ विचार गरीरहेछ।
युरीबोर किन नकारात्मक छ?
अन्तमा हामी संगठित जम्मा संग छोडिएको छ। यी सबैभन्दा जटिल छन् र धेरै ठोस वित्तीय ज्ञान छ जो मानिसहरु को लागी डिजाइन गरीएको हो। यहाँ पनि, तपाइँको मुनाफा Euribor मा निर्भर हुन सक्छ, तर पनी अन्य शेयरहरु मा, जस्तै शेयर को एक प्याकेज को रूप मा। हुन सक्छ कि यो हुन सक्छ, ग्यारेन्टी फिर्ता धेरै सानो छ र सम्पत्ति को विकास मा धेरै निर्भर गर्दछ। यसको अतिरिक्त, यी निक्षेपहरुमा धेरै थोरै तरलता छ।
संरचित निक्षेपहरू के हुन्?
अब यो तपाइँ मा छनौट गर्न को लागी यदि तपाइँ एक बैंक निक्षेप मा तपाइँको पैसा लगानी गर्न चाहानुहुन्छ वा यदि तपाइँ यसलाई शेयर बजार मा आफैलाई ह्यान्डल गर्न चाहानुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » वित्तीय उत्पादनहरू » जम्मा » एक बैंक निक्षेप के हो